परिक्षा अघि नै बाहिरियो प्रश्नपत्र - Kantipath.com
केही दिनअघि इन्जिनियरिङ संकायको स्नातक दोस्रो सेमिस्टरको भौतिक शास्त्र विषयको प्रश्नपत्र परीक्षाभन्दा दुई घण्टाअघि बाहिरिएको थियो । प्रहरीले केही विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको कान्तिपुरले लेखेको छ ।
आइतबार इन्जिनियरिङ संकायकै दोस्रो सेमिस्टरको हाइड्रोलिक विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो । सोमबार हुने स्टिल विषयको प्रश्न पनि परीक्षाअघि नै सार्वजनिक भएको आशंकामा परीक्षा कार्यालयले अर्को प्रश्नको व्यवस्था गरेको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले लिने हरेक प्राविधिक विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा पहिला नै शृंखलाबद्ध रूपमा बाहिरिँदै आएको परीक्षा नियन्त्रक प्राडा सूर्यप्रसाद संग्रौलाले स्विकारेका छन् ।
यसमा परम्परागत ठूलो सञ्जाल सक्रिय रहेका कारण पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन र यसलाई सुधार गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । परीक्षाको गोप्य शाखाका कर्मचारी नै प्रश्नपत्र बाहिर पुर्‍याउन संलग्न रहँदै आएको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी छ । प्रश्नपत्र छाप्ने कार्यमा गोप्य शाखाका कर्मचारी संलग्न हुने भएकाले उनीहरूकै माध्यमबाट बाहिरिने गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोत
Previous Previous post: ‘राम र सीता’ लाई बालुवाटारबाट “अयोध्या” लगिँदै : प्रधानमन्त्रीद्वारा धार्मिक अनुष्ठान
Next Next post: नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का ६० जना कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश
जुमबाट विद्यार्थीलाई पढाइरहेका बेला शिक्षककी श्रीमती कक्षामा पसेपछि
बमकाण्डका दुइ भीआइपी एउटै जेलमा : अर्को नरसंहारको आशंका !!
डोटीमा एक युवतीकाे आगो लगाएर हत्या
विद्यालयकाे प्राङ्गणमा शव ल्याएपछि पठनपाठन प्रभावित !
ठगी गर्ने ५ जना कर्याप्यै
स्थानीय तह भ्रष्टाचारको ‘अखडा’ बन्दै, ४ अर्ब ५ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा, ८ सय ९४ कारबाही !